Mmiri sọfụ mmiri na-asacha ahịhịa mmiri 25 875 na-asacha XNUMXMl (Tesco) | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Surf Tropical Lily Na-asacha Liquid 25 Na-asacha 875Ml (Tesco) - Ordrs
Mmiri sọfụfụ mmiri na-asacha ahịhịa 25 na-asacha 875Ml (Tesco)
Surf Tropical Lily & Ylang-Ylang bụ ọmarịcha ọmarịcha okooko osisi abụọ mara mma ma na-adọrọ adọrọ. Nwanyị na ike, na-esi ísì ụtọ nke lily, isi ifuru bụ ihe kachasị amasị ya, ogo ya n'elu okooko osisi ise kachasị ewu ewu n'ụwa. Ylang-Ylang ifuru ahụ na-esi ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ na-adọrọ uche ma na-eme ka mmụọ nsọ dị jụụ. A na-ekwu na ísì ụtọ ya na-ejikọ uche na ahụ, na -emepụta mmetụta nke ọupụ. Tropical Lily & Ylang-Ylang ya na isi ya na-esi ísì ụtọ dị na mmiri mmiri na-asacha, na-asa ntụ ntụ na ịsa capsules ma dị mma maka ịsacha agba na ọcha. Ebe a na-asa akwa Surf na-ewetara gị ọ joyụ nke isi, ogologo oge ị sachara uwe gị. Mgbe ị gbasasịrị ísì ụtọ na-esi ísì ụtọ nke ewepụtara site na ụbọchị gị, akwa gị ga-adị ụtọ nke ọma, ị ga-ahụ ihe dị omimi dị omimi. Mmiri mmiri mmiri dị mma maka ịsacha oyi. Ọ na-enye ezigbo ísì ụtọ na nhicha na-egbuke egbuke, nwekwara ike iji ya mee ihe. Iji jiri mmiri mmiri sọfụfụ, wunye n’ime mkpọmkpọ ebe ịsa ahụ. Ekem tinye akwa gị ma malite ịsa ahụ. Maka nsonaazụ kacha mma, jiri mmiri mmiri 35 nke mmiri mmiri sọfụ mmiri (4-5 n'arọ) na mmiri dị nro / ọkara. Jiri 52 ml maka ibu buru ibu ma ọ bụ sie ike, na mmiri siri ike.
Surf Tropical Lily na Ylang-Ylang Lisa Liquid na-enye ntiwapụ mgbe nke na-esi ísì ụtọ na-ewuli elu
Mmiri mmiri na-asa mmiri na ngwakọta nke osisi Tropical Lily na Ylang-Ylang iji nye uwe gị akwa na-esi isi ísì ụtọ ewepụtara ụbọchị niile.
N'iji usoro nhicha dị mma, mmiri mmiri na-enye ịsa akwa mara mma n'oge ọ bụla
Lipo na-eme ka mmiri na-ehicha mmiri na-adịkarị ogologo
Nwanyị na ike, ihe lily ahụ na-acha ọcha, isi ifuru bụ ọkacha mmasị, ogo na isi ise kachasị ewu ewu na ifuru ụwa.
Ylang-Ylang na-esi ísì ụtọ dị na mmiri anyị na-asa mmiri na-adọrọ uche ma mee ka mmụọ nsọ dị jụụ, ma kwuo na ọ ga-ejikọ uche na ahụ ọzọ
Ngwugwu nha: 875ml